Drogba Oo Ka Tagay Galatasaray
HomeWararka MaantaDrogba Oo Ka Tagay Galatasaray
Ciyaaryahankii hore ee kooxda Chelsea Didier Drogba ayaa ku dhawaaqay inuu ka tagay naadiga uu intii u dambeysayba u ciyaarayay ee Galatasaray.
Ciyaaryahankan 36 jirka ah oo ka soo wareegay naadiga Shanghai Shenhua bishii January 2013 ayaa ka caawiyey kooxda Galatasaray inay ku guulaysato Horyaalka iyo Turkish Super Cup sanad gudihi.
Isagoo la hadlayay Telefishan ka khaaska ah ee naadiga, wuxuu Drogba carabka ku adkeeyey inuu macasalaamaynayo kooxda.
“Galatasaray niyadayda ayay waligeed ku jiri doontaa, Aad baan ugu riyaaqsanahay inaan kooxdan ka soo mid ahaa.
“Halkan uma soo lacag doonan. Haddii aan lacag doonayo waxaan joogi lahaa China. Waxaan halkan Turkey u imid inaan kubad ciyaaro, inaan markale dareemo xiisihii iyo xamaasadii kubada cagta. Inaan goolal ka dhaliyo kooxaha sida Fenerbahce iyo Besiktas, Waxaan u malaynayaa inaan woxogaa farxad ah u horseeday taageerayaashayada.”
Drogba Wuxuu sidoo kale mahadnaq balaadhan hawada u mariyey shaqsiyaad uu ka mid yahay tababarihiisii hore ee Chelsea, Jose Mourinho , kuwaas oo uu sheegay inay ku dhiiri galliyaan imaanshaha Turkiga.
“Jose Mourinho iyo Wesley Sneijder ayaa qayb libaax ka qaatay go’aankii aan kooxdan heshiiska kula saxeexday. Jose wuxuu igu yidhi ‘Haddii Wesley tagayo, waa inaad adiguna tagtaa’, markaasaan imid.
“Farxad weyn bay ii tahay inaan ka soo barbar ciyaaray isaga [Sneijder].”
Weeraryahan Drogba ayaan marna soo hadal qaadin ama sheegin meesha xigta ee uu uga amba baxayo wadanka Turkiga , waxaase la hubaa kaliya inuu xooga saaray koob u muuqda kiisii u dambeeyey ee uu Xulkiisa qaranka Matalo , oo ah Koobka aduunka oo uu bisha June kaga qayb gallayo Brazil
Baro: Shanta laacib ee ugu kubad sameynta fiican horyaalka Spain sannadkan
Southampton 1 – 1 Chelsea : Koeman Oo Isku Maray Mourinho